Aya ndiwo maratidziro atinoita pane seti yeApple Watch tambo uye kesi yeAirPods kubva kune anogadzira Nomad | Ndinobva mac
Kana tichitsvaga zvishongedzo zveApple Watch yedu, muApple Chitoro isu tinayo chiverengero chikuru chezvinhu, kunyanya tambo, kunyangwe mitengo yacho yakati rebei pane izvo zvinoshandiswa. Nekudaro, kana tikatarisa kune vamwe vanopa, tinogona kuwana mhando yepamusoro yezvinhu zvekushandisa pamutengo unopfuura unonzwisisika.
Iyo inogadzira zvishongedzo uye zvishongedzo Nomad yatanga mutsara mutsva wezvishandiso zveApple inonzi Natural Collection. Mutsetse uyu unosanganisira a tambo nyowani yeApple Watch uye kesi yeAirPodss, zvese zvakagadzirwa kubva kune yakakosha Horween dehwe iro kambani yeAmerica iri muSanta Barbara yave nemukurumbira.
Asi chii chinonyatsosiyanisa muunganidzwa mutsva uyu matauriro eganda anoshandiswa, toni yakajeka. Tinogona kazhinji kuwana nhamba hombe yemabhande eApple Watch mumatoni akasviba, zvisinei uyu mugadziri anosarudza kupa tambo yakagadzirwa neganda nematoni akareruka, ayo anozo ivo vanozvipa iko kubata kwekunaka uye kwepakutanga.
Kune avo vasingazive nezveganda zvigadzirwa zvemugadziri Nomad, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi zvakagadzirwa nemiriwo yakasvinwa dehwe Yakarapwa zvakanaka neimwe yeaya ekare e tanneries muUnited States. Iri ganda rakaomarara asi rakapfava iro rinonzwa kunyangwe rakawedzera mari kupfuura zvarinogona kunyatsoita kunge remutengo.
Asi pamusoro pezvo, ivo zvakare vanoita kuti zviwanikwe kwatiri kesi yeAirPods yakagadzirwa neyakafanana nedehwe zvinhu, kesi inotengwa pamadhora makumi matatu, nepo tambo yeApple Watch, iwo iwo ruvara, inotengwa pamadhora makumi matanhatu. Zvinhu zviviri izvi zvinowanikwa kuburikidza ne yepamutemo webhusaiti yemugadziri Nomad.
Dai iwe wanga uchitsvaga yekutanga AirPods kesi uye tambo kuenzanisa, Mhinduro yaNomad ndiyo yauri kutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Aya ndiwo maratidziro ayo pane seti yeApple Watch tambo uye kesi yeAirPods kubva kugadziri Nomad
Bill Murray naSofia Coppola kuti vayananezve mufirimu yekutanga yaApple